PSJTV | ग्राहककै रकम चोर्ने बैंकका सीईओलाई कस्तो कारबाहि ?
शनिबार, १८ असार २०७३ पिएसजे न्युज
प्रभु बैंकसँग ‘मर्ज’ हुनुअघिको ग्राण्ड बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले ग्राहकले आफ्नो खातामा राखेको भनिएको रकम बैंकका स्टाफहरुसँगको मिलेमतोमा डकैतीको शैलीमा आफ्नो घर पु¥याउने गरेको कुरा उनी पदबाट हटेको दुई वर्षपछि खुलासा भएको छ । उनी २०७० चैत ९ गतेसम्म त्यस बैंकको सीईओ थिए । ग्राहककै रकम चोर्ने ग्राण्ड बैंकका तत्कालीन सीईओ सुधीरलाई कस्तो कारबाहि होला? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
उनले बैंकमा सीईओ हुँदा गम्भीर प्रकृतिका गलत कार्य गरेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले उनलाई हटाउन बैंक सञ्चालक समितिलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर उनले पनि प्रमोटर रहेको कारण देखाई सञ्चालक समितिलाई आफुहटाउने निर्णय नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । बैंकका अध्यक्ष रहेका स्वरुप बहादुर कोने गुरुङको स्वामित्वका अस्पताललगायतका प्रोजेक्टहरुमा नियमविपरीत लगानी गरेर उनले अध्यक्षलाई आफुविरुद्ध जान नसक्ने बनाएका थिए र बैंकभित्र आफ्नो पूर्णपकड जमाएका थिए ।
कर्जा दिँदा कमिसन लिने र त्यसका लागि ‘लबिङ’ गरेको भनेर पनि ०.५ प्रतिशत खर्च असुल्ने धन्दा समेत उनले गर्दै आएका थिए । एउटा घटनामा उनले एक जना वृद्ध ग्राहकलाई ड्राफ्ट एउटा देखाएर अर्कै पत्रमा हस्ताक्षर गराएको पनि पाइएको आर्थिक दैनिकमा खबर छ । उनका बारेमा राष्ट्र बैंकमा धेरै उजुरी परेपछि बैंकिङ क्षेत्रबाटै बाहिरिने गरी ‘बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले २०७० चैत ९ गतेदेखि लागू हुने गरी बाध्य भएर राजीनामा गरेका थिए ।
उनले राजीनामा गरेपछि बैंकमा उनले गरेका अनियमितताहरु विस्तारै बाहिर आयो र त्यसलाई उनकै नियन्त्रणको टीमले दबाएर राख्ने प्रयास ग¥यो । तर पनि केही घटनाबाहिर आएपछि सुधीर खत्री उम्किए पनि अरु सबै जेल जाने अवस्था देखिएपछि ६५ को अनुपातमा कोनेले प्रभु बैंकसँग ग्राण्ड बैंकलाई मर्ज गरे । मर्जपछिको सञ्चालक समितिमा पनि उनीहरु कोही पनि बस्न मानेनन् । २०७२ माघ २९ गतेदेखि ती दुई बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको थियो । मर्ज हुनुअघि मर्जर प्रक्रिया आउन खत्रीले पटक–पटक असफल प्रयास गरेको थिए र उनको प्रयास असफल नै रहेको थियो ।
मर्जपछि माथिल्लो तहमा रहेर काम गरेका पूर्वसीईओ खत्रीका विश्वास पात्रहरुलाई आकर्षक रकम दिएर बैंकले विदाइ गर्दै गयो र बैंकले त्यहाँभित्रका घटनाक्रमहरु अध्ययन गर्दै गयो । त्यही क्रममा खत्रीले आफु सीईओ हुँदा ग्राहकले खातामा जम्मा गर्न काउण्टरमा दिएको रकम समेत चोरेर घर पु¥याउने गरेको खुलासा भएको हो । तत्कालीन ग्राण्ड बैंकमा सीईओ खत्रीका नातेदार भास्कर खत्री पनि काम गर्दा रहेछन् । एक जना महिलाले आफ्नो खातामा राख्न काउण्टरमै गएर भास्कर खत्रीलाई २० लाख रुपैयाँ दिएकी रहिछन् । उनी पैसा दिएर स्लिप लिएर फर्किइन् तर उनले कम्प्युटरमा उक्त रकम इन्ट्री नै गरेका रहेनछन् । उनीहरुको त्यस्तो धन्दा नै रहेछ ।
निकै समयपछि उनले उक्त रकम आप्mनो खातामा नै नभएको थाहा पाइन् । त्यसलाई खोजबिन गर्नखोज्दा खत्रीहरुले उल्टै धम्क्याउने र तर्साउने कार्य गरेछन् । अहिले बैंक मर्ज भएपछि खत्रीले रकम चोरेको घटना सतहमा भएको छ ।सो घटना सतहमा आएपछि गरिएको केरकार र बयानबाजीमा भाष्कर खत्रीले उक्त रकम त्यति बेलाका सीईओ सुधीर खत्रीले घर पु¥याइदिनु भनेकाले आफुले उनको घरमा पु¥याइदिएको स्वीकारेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।